Nkwado igwe ọhụrụ Emslim Muscle Building machine
Ngwaahịa ọhụrụ na shelves, ntụgharị mmiri na mgbụsị akwụkwọ, oge na -eme ọsọ ọsọ. Ị dịla njikere ịsị ahụ gị nke ọma mma? Mgbe ijiri ụdị stent a na -enye gị ohere ịnata ọgwụgwọ mgbatị magnetik nke ọma, ị gaghị enwe ike ịhapụ ya. Nke a bụ ezigbo ...
Beijing Nubway S&T Co., Ltd. bụ ọkachamara na -emepụta ngwa mma, akụrụngwa ahụike, ihe nyocha akpụkpọ anụ sistemụ mma ụlọ na ihe ndị ọzọ.Our ụlọ ọrụ anyị wuru na 2003. Anyị nwere ngalaba nyocha na mmepe nke anyị na ụlọ ọrụ nke anyị ka anyị nwere ike inye ọrụ OEM na ODM ...
Nlekọta ihu HIFU: kedu ihe ọ bụ, otu o si arụ ọrụ, mmetụta, ọnụ ahịa, wdg.
Igwe ihu ultrasound lekwasịrị anya nke ukwuu, nke a na-akpọ ihu HIFU, bụ ọgwụgwọ na-adịghị emerụ ahụ maka ịka nká ihu. Usoro a bụ akụkụ nke usoro na-arịwanye elu na ọgwụgwọ mgbochi ịka nká nke nwere ike ịnye ụfọdụ uru nke ihu ihu na-enweghị ịwa ahụ. Dabere na data sitere na American Academy of ...
Otu dọkịta na-awa plastik kpọrọ ngwaọrụ a na-akpụgharị ahụ na-adịghị emerụ ahụ "Grail Nsọ"
Nke a abụghị ihe ijuanya, mana ọ dịghị mfe ịnweta akwara siri ike na nke nwere ụda olu. Ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa na ị ga-azụ dị ka onye na-eme egwuregwu n'egwuregwu Olimpik iji nweta ihe ọkpụkpụ, ọtụtụ n'ime anyị ka na-agbasi mbọ ike iwepụ obere abụba ndị ahụ-ọkachasị afọ-nke yiri ka ọ bụ onye isi ike karịa nwa na-amụ ije ...
Oge nwalere: 7 ọgwụgwọ ịbelata ibu na-adịghị emerụ ahụ ịnwale na Dubai | Ahụike & Mma
Bịa ya n'oge oge bikini, mana n'oge na -adịbeghị anya, na nnọkọ oriri na ọ acrossụ acrossụ na mba ahụ, otu isiokwu alaghachila n'ọnụ ọnụ: CoolSculpting. Ọ bụghị teknụzụ ọhụrụ, nke mbụ achọpụtara abụba kefriza akpọrọ lipolysis oyi kpọnwụrụ. Dabere na asịrị, ndị dọkịta chọpụtara na ...
iwepụ ntutu ntutu diode laser
Gee ntị, anyị ga-anabata ihu igwe na-ekpo ọkụ kama ihu igwe oyi ụbọchị ọ bụla, mana enwere azụmaahịa na-enwe ike iyi uwe dị mkpụmkpụ na obere aka uwe ọzọ: ntutu isi kpughere. Hey, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ n'okike, nke ahụ ga -adị mma. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ọtụtụ nhọrọ, site na ngwa ngwa na mfe (dịka shavin ...
Ngwa mwepụ ntutu laser 14 kachasị mma n'ụlọ na 2020
Ịchọta ụzọ kwesịrị ekwesị maka iwepụ ntutu nwere ike ịbụ usoro. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ịme ntutu na-egbu mgbu nke ukwuu na ịkpụ afụ ọnụ na-ewe oge, iwepụ ntutu laser nwere ike bụrụ ihe ị na-achọ. Ọ bụghị naanị na ọgwụgwọ ahụ chọrọ obere mbọ, mana ọ bụkwa naanị usoro iwepụ ntutu nwere ike inye gị kwa ...
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara akpụkpọ anụ carbon laser
A na -ejikarị ya maka ndị nwere akpụkpọ anụ, ọnya, na pores buru ibu ma ọ bụ mkpọchi. Ọ bụrụ na ịmalite ịhụ ka anwụ na -emebi akpụkpọ ahụ gị, ọgwụgwọ a bakwara uru. Akpụkpọ carbon carbon abụghị maka onye ọ bụla. N'isiokwu a, anyị ga -atụle uru na ịdị irè nke usoro a ka ị nwee ike ...
Igwe mmiri Dermabrasion
Kedu ihe na -adịghị mma, pores? Anaghị m elekọta gị nwa oge, nke na -akọwa ihe kpatara ị jiri buru ibu ma jupụta na mmadụ. Achọghị m ka m jiri mkpịsị aka m kpoo gị. Ngwa nhicha pore dị nchebe na ntụkwasị obi ga -eme nke ahụ! (Ikwesịrị ikwu okwu ma gee anụ ahụ gị ntị, emela ...
Ọgwụ ihu Oxygen: usoro, nrụpụta ọrụ, mmetụta dị n'akụkụ, ọnụ ahịa
Onye na -achọ mma na -emekarị ọgwụgwọ ihu maka ikuku oxygen. A na-ahụta ya dị ka usoro “anaghị agwọ ọrịa” n'ihi na onweghị ihe a gbanyere n'ime ahụ ma anaghị eji kemịkal. Ahụ chọrọ oxygen iji mee nke ọma. Nke a bụ ihe mere anyị ji eku ume. Echiche dị n'azụ ihu ikuku oxygen-enweghị sayensị ...
Cryotherapy maka ịbelata ibu: uru a na -ebo ebubo yana nsonaazụ ya
Ọgwụ cryotherapy niile na -ewu ewu na -enye gị ohere iguzo n'ime ụlọ na -ekpuchi akụkụ ahụ niile belụsọ isi. Okpomoku ikuku dị n'ime ụlọ na -agbada ruo 200 Celsius F ruo 300 Celsius maka oge ruru nkeji ise. Cryotherapy aghọọla ewu ewu n'ihi ike ya ịgwọ mgbu na c ...
Dauerhafte Haarentfernung Wien: Laser Haare na -abanye na -adịgide adịgide
Ị na -agwụ ike ịkpụ afụ ọnụ oge niile? Isi ntutu gị siri ike na -enye gị nsogbu? Iwepụ ntutu na -adịgide adịgide na laser, ọkụ na maka ụlọ. Ọgwụgwọ ọ na -efu otu nnọkọ na -egbu mgbu yana ma ntutu isi ọ naghị eto azụ? Chọpụta ihe ebe a. Iwepụ ntutu na -adịgide adịgide bụ ezigbo ngwọta ...
igwe na -agbada cryolipolysis
Yabụ, mgbe FDA kwadoro ọgwụgwọ abụba a na-anaghị emebi emebi CoolSculpting na 2010 ghọrọ isiokwu, ị nwere ike maa etu ọ dị m: obi abụọ. Mana afọ iri ka e mesịrị, anyị bịara ebe a, ndị mmadụ ka na -ekwu maka mmemme a, yabụ ekpebiri m ma eleghị anya m kwesịrị idobe ihe mgbochi m n'akụkụ wee chọta ...